संसद विघटनविरुद्ध लड्न कांग्रेस एक्लै काफी छ : महामन्त्री कोइराला - AIM Khabar
गृह पृष्ठ > नेपाल समाचार > संसद विघटनविरुद्ध लड्न कांग्रेस एक्लै काफी छ : महामन्त्री कोइराला
संसद विघटनविरुद्ध लड्न कांग्रेस एक्लै काफी छ : महामन्त्री कोइराला
February 16, 2021 February 16, 2021 News Desk17
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले संसद विघटनको कदमविरुद्ध लड्न कांग्रेस एक्लै काफी रहेको बताएका छन् । नेपाली कांग्रेस दाङले आयोजना गरेको विरोधसभामा महामन्त्री डा. कोइरालाले संसद विघटनको कदम असंवैधानिक भएकोले कांग्रेस आन्दोलनमा उत्रिएको बताए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको विवादको शिकार संसदलाई बनाइएको भन्दै कोइरालाले कम्युनिष्ट पार्टीका दुवै समूह जनताविरोधी रहेको आरोप लगाए । उनले आन्दोलनमा जान कांग्रेसलाई कसैको साथ नचाहिने बताए ।
‘प्रतिगमनविरुद्ध कांग्रेसले हिजोपनि लडेको हो आज पनि लड्नेछौं । ओलीविरुद्ध लड्न अर्को कम्युनिष्टको सहयोग चाहिँदैन, कांग्रेस एक्लै काफी छ’, कोइरालाले भने । उनले संयुक्त आन्दोलन अहिले आवश्यकता नभएकोले कांग्रेस आफ्ना एजेण्डा बोकेर एक्लै जनतामा जाने बताए ।
महामन्त्री कोइरालाले सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाटै संसद ब्यूँतने विश्वास समेत व्यक्त गरे । सभामा बोल्दै कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य दीपक गिरीले कम्युनिष्टहरूमा देखिएको लोभी चरित्रका कारण संविधान संकटमा परेको आरोप लगाए ।
दिल्लीबाट हिँडेरै जोगवनी, भारतीय प्रहरीले सीमा कटायो
लेखेर राख्नुस् कम्युनिस्ट सरकारका अबका चार वर्षमा देश बर्बाद हुन्छ : गगन थापा